Ceelgows.com » 2012 » September » 04
Home » Archive for September 4th, 2012
MAANTANA KOOFIYAD DHEER MIYAA LA SOO HUWADEY!!!!
- Sep 4, 2012	Caku iyaga’e iyo annaga!! Miyaan marna nalaga waayin mid dhoohan oo gorof ama kiish dabada ka daloola sita oo raba in ay qole kale qandigaas soor quureed ugu gororiso!!!. Dhorraad Teendhadii Dhagarta ee Ina Cumar Geelle uu Kafanta Sharaf darrada Summad Boolida 4.5 uu tuulada Carta uga soo galiyey Habraacii Hoggaaminta Siyaadda iyo Maamulka Ummadda Soomaaliyeed. Waagaas waxaa... Tags: muqdisho Murashaxiinta madaxweyne ee gudbiyay araajidooda ayaa waxay tiradoodu maraysaa 31 xubnood, iyadoo aysan ku jirin xubnahaas madaxda dowladda Soomaaliya ee uu waqtigeedu dhammaanayo.
- Sep 4, 2012	Murashaxiinta madaxweyne ee gudbiyay araajidooda ayaa waxay tiradoodu maraysaa 31 xubnood, iyadoo aysan ku jirin xubnahaas madaxda dowladda Soomaaliya ee uu waqtigeedu dhammaanayo.
Guddiga doorashooyinka ayaa waxay maalintii labaad ku howlan yihiin qabashada araajida murashaxiinta ayaa dhammaantood shubay lacagtii ay doorashada ku geli lahaayeen oo midkiiba ay tahay 10,000 oo dollarka Mareykanka ah.
Xubno... Tags: DOORASHADA SHIIQ SHARIIF Gaalkacyo: C/lahi Yusuf International Airport oo maanta ay isdaba marayaa Air copters iyo diyaarado yara yar.
- Sep 4, 2012	Magaaladda Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanata waxaa laga dareemayey mashquul aad u tira badan oo kajira Garoonka diyaaradahha ee magaaladda.
Diyaaradahaan oo inta la arkay ahaa 3diyaaradoo oo Air copters ah iyo 2yaryar oo noca dadka qaada ayaa maanata waxaa ay dagayeen garoonka diyaaradahaa ee C/lahi Yusuf International Iarport.
Diyaaradahaan oo aan ilaa hadda lagaranay cida rasmi... Tags: gaalkacyo Musharixiinta kasoo horjeeda in uu soolaabto hogaankii hore ee dalka oo lasoo baxay hal nin oo u tartama.
- Sep 4, 2012	Musharixiin aad u farabadan ayaa waxaa ay ku loolamayaan sidii ay ku hanan lahaayeen hogaanka dowladda Soomaaliya, ee haatan ladooranayo.
Kulan ay yeesheen koox isbahay satay kuwaas oo doonaya sii ay uga hortagi lahaayeen in uu marlabaad hogaanka dalka kusoo laabto maamulkii horay u hogaaminayey wadanka ee uu madaxda ka ahaa Maxaweyne Shariif shiikh Axmed.
kooxdaan ayaa waxaa ay qabteen tartan... Tags: muqdisho Daily Nation news: Troops step up Kismayu attack plans
- Sep 4, 2012	IN SUMMARY
In the past few months, the Kenya Navy has attacked... Tags: kismaayo Kismaanyo oo ay qarka usaaran yihiin Ciidamaddii Kenya iyo Soomaalidii Kaabaysay
- Sep 4, 2012	Magaaladda kismaanto ayaa waxaa ay sii galaysaa xaalada adag oo ay shacabku ku dareemayaan culuysa aad u balaaran kaas oo kasoo food saaraya amaanka gobolka oo gacanta kasii baxaya.
Magaaladda kismaanyo ayaa waxaa ka jira qax u barakac balaaran ayada oo maalinkii shalay ahaa galinkii danbe uu dagaal ka qarxay Birta dheer kaas oo ay ciidanka huwantu ku xoog roonaadeen.
Xiisadaan ayaa waxaa ay kusoo... Tags: kismaayo Gudiga Doorashooda Madaxnimada Soomaliya oo qabanaya araaji kabadan intii la filayey
- Sep 4, 2012	Gudiga doosharada ayaa waxaa uu bilaabay qabasha araajida musharaxiinta u tartamaya madaxnimada dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 4sano ee soosocta.
Gudiga loo xilsaaray doorasha ayaa waxaa ay sheegeen in... Tags: DOORASHADA SHIIQ SHARIIF Jabarti ismacil waa dhinyarada ku nool seattle washington Taageersana jabhada ONLF
- Sep 4, 2012	Jabarti ismacil waa dhalinyarada ku nool seattle washington Taageersana jabhada ONLF Shalay Taariiqdu markay ahayd waxaa xaflad loogu qabtay magaalada seattle washington onlf sanadguuradii 28naad ka soo wareegatay halkaaso xaflad qurux badan ka dhacday oo ay soo abaabuleen halgamaasha onlf oo dhalinyadaa oo uu ka midyahay jabarti ismacil Iyo dhalinyarado badan oo ku nool magaalada seattle washington... Tags: onlf Ka Raadso warkii	Custom Search